Re कारणहरू किन रेफरल मार्केटि Software सफ्टवेयरमा लगानी गर्नु तपाईंको व्यवसाय वृद्धिको लागि उत्तम लगानी हो Martech Zone
जब यो व्यापार वृद्धि को लागी आउँछ, टेक को उपयोग अपरिहार्य छ!
सानो देखि आमा र पप ठूला निगमहरूको लागि पसलहरू, यो निर्विवाद छैन कि टेकमा लगानीले ठूलो मोल चुकाउँछ र धेरै व्यावासायिक मालिकहरूले टेक क्यारीमा लगानी गरेको भारलाई महसुस गर्दैनन्। तर उन्नत टेक्नोलोजी र सफ्टवेयरको शीर्षमा रहनु कुनै सजिलो कार्य होइन। धेरै विकल्पहरू, यति धेरै विकल्पहरू ...
तपाइँको व्यापार को लागी सही रेफरल मार्केटि software सफ्टवेयर मा लगानी महत्वपूर्ण छ र कुनै पनि बृद्धि रणनीति को एक अभिन्न अंग हुनु पर्छ। तर रेफरल मार्केटि software सफ्टवेयर लगानी को बारे मा छैन "छिटो धनी पाउनुहोस्।" यो एक बहुमूल्य लगानी हो।
रेफरल मार्केटि software सफ्टवेयर र टेक्नोलोजी तिर पैसा राख्नु सबै तपाइँको व्यवसाय मापन र लामो अवधिको मुनाफा अधिकतम गर्न को लागी हो। र, जब कि एक मूल्य मा आउँछ, यो सायद तपाइँ सोच्न भन्दा कम छ।
के तपाईं, र तपाईंको व्यवसायले यसको भुक्तान गर्न सक्तैन?
एक रेफरल मार्केटिंग सफ्टवेयर लगानी भनेको के हो?
प्रत्येक ब्यापार मालिकसँग आफ्नो पैसा कहाँ र कसरी गर्ने भन्ने विकल्प हुन्छ। यो ईन्भेन्टरी किन्न र स्टाफलाई काममा लिने, उपकरणहरू र उत्पादनहरू खरीद गर्न जुन तपाईं आफ्नो व्यवसाय चलाउन प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तर कहाँ र कहिले लगानी गर्ने भन्ने निर्णय मुश्किल हुन सक्छ।
एक बर्ष भित्र, स्मार्ट रेफरल मार्केटिंग सफ्टवेयर लगानी गर्ने कम्पनीहरूले छिटो वृद्धि र राम्रो लाभ मार्जिन देख्न सक्दछन्। त्यहाँ धेरै सिफारिश मार्केटिंग सफ्टवेयर उत्पादनहरू छन् जुन तपाईंको जीवन र तपाईंको स्टाफको जीवन सजिलो बनाउन सक्छ।
खुशी कर्मचारीहरू = अधिक वृद्धि!
रेफरल मार्केटि software सफ्टवेयर संग, यो यति धेरै छैन कि तपाइँ कति खर्च गर्नुहुन्छ; यो तपाइँ कसरी खर्च गर्नुहुन्छ। तपाइँ केहि चाहानुहुन्छ कि तपाइँको कम्पनी को आदर्श संग पs्क्तिबद्ध र तपाइँको काम सजिलो र राम्रो बनाउँछ? यो एक महत्वपूर्ण लगानी हुन आवश्यक छैन। यो सबै सबै भन्दा राम्रो छनौट गर्न तल आउँछ।
रेफरल मार्केटिंग सफ्टवेयरमा "लगानी गर्नु" भनेको भनेको रेफरल मार्केटि software सफ्टवेयरमा दिनहुँ दिनको दौडान, मार्केटिंग वा व्यवसायको अन्य अपरेशनहरूको लागि आवश्यक इजाजतपत्रहरू प्राप्त गर्नु हो। सामान्यतया, व्यवसाय मालिकहरू रेफरल मार्केटि software सफ्टवेयर खरीद गरेर सुरू गर्दछन् जुन पछि व्यवसायमा चलाउन आवश्यक पर्दछ, जबकि पछि चरणमा "राम्रो छ" सफ्टवेयरको लागि लाइसेन्स खरीदको लागि पर्खिरहेका छन्।
केहि सेन्ट बाट हजारौं डलर सम्म कहीं लाईसेन्स लागत संग; र केहि एक एक बन्द लागत, अन्य एक मासिक आवर्ती शुल्क लगाउने संग, यो रेफरल मार्केटि software सफ्टवेयर मा लगानी गर्नु अघि सबै विकल्पहरु तौल गर्न को लागी यति महत्वपूर्ण कहिल्यै भएको छैन।
रेफरल मार्केटिंग सफ्टवेयरमा लगानीले कसरी व्यापार बृद्धि गर्न मद्दत गर्दछ?
चाहे तपाइँ एक स्टार्टअप को मालिक हो या एक बहु-समूह अपरेशन को एक सीईओ हैं, सबैलाई hype विश्वास छैन कि रेफरल मार्केटिंग सफ्टवेयर मा लगानी व्यापार बृद्धि गर्दछ। र कि यो तर्कसंगत कुनै पनि व्यापार को लागी सुरक्षित लगानी हो।
यहाँ क्रिस्टी म्याकाडमका अनुसार नौ कारणहरू छन्; संस्थापक र सीईओ रेफरल मार्केटिंग सफ्टवेयर नेता, रेफरल कारखाना किन साझेदारी गर्दछ किन सबैभन्दा अप-टु-डेट रेफरल मार्केटिंग सफ्टवेयरमा लगानी गर्नु नै तपाईंको व्यवसायको वृद्धि र मार्केटिंग रणनीतिका लागि गर्न सक्ने उत्तम कुरा हो।
पढ्नुहोस् Martech Zoneरेफरल कारखाना को बारे मा लेख
कारण 1: अगाडि रेफरल गेम रहनुहोस्
एक कम्पनीको रूपमा तपाईसँग हुन सक्ने उत्तम फाइदाहरूमध्ये एक भनेको तपाईका प्रतिस्पर्धीहरूको अगाडि नै रहन्छ र यसलाई प्राप्त गर्न सजिलो तरीका भनेको तपाईको व्यवसायलाई संचालन गर्न रेफरल मार्केटिंग सफ्टवेयरको प्रयोग गर्नका लागि सबैभन्दा उन्नत र सरल हुनु हो। तपाईंको व्यवसायले राम्रो रेफरल मार्केटिंग सफ्टवेयर प्रयोग गर्दछ, कम म्यानुअल कार्यहरू टिमले कार्यान्वयन गर्नु पर्ने हुन सक्छ।
यो अन्ततः मतलब छ कि उनीहरु लाई ग्राहकहरु संग काम गर्न र बिक्री बनाउन जस्तै अन्य महत्वपूर्ण कार्यहरु मा काम गर्न को लागी अधिक समय छ। जब तपाइँ सबैभन्दा नयाँ टेक्नोलोजी हुनुहुन्छ, तपाइँसँग अन्य कम्पनीहरुलाई पछाडि पार्ने नयाँ तरीकाहरु को लागी पहुँच छ - चाहे त्यो आधुनिक मार्केटि techniques प्रविधिहरु, एक अधिक शक्तिशाली प्रणाली, वा सुव्यवस्थित उत्पादन को माध्यम बाट हो।
प्रतिस्पर्धा मा एक लेग-अप प्राप्त मतलब तपाइँको व्यवसाय स्वाभाविक रूपमा अधिक ग्राहकहरु लाई आकर्षित र तपाइँको राजस्व वृद्धि हुनेछ। सोच्नुहोस् त्यस समयको बारे सोच्नुहोस् जुन सामाजिक नेटवर्कहरूले उनीहरूको विज्ञापन प्लेटफर्महरू सुरू गरे। ती छनौट गर्नको लागि प्रारम्भिक हो (स्मार्ट सफ्टवेयरको प्रयोग गरेर उनीहरूका लक्षित दर्शकहरूलाई हजारौं विज्ञापनहरू सुरूवात गर्न) उनीहरूको प्रतिस्पर्धा कुचल्यो।
कारण 2: सुधारिएको रेफरल दक्षता
सबै भन्दा राम्रो रेफरल मार्केटिंग सफ्टवेयर हुनुको मतलब तपाईंको व्यवसायलाई अझ बढी सक्षम बनाउनु हो। नयाँ रेफरल मार्केटिंग सफ्टवेयरको प्रयोगले सुरुमा केही बगहरू र बढ्दो पीडा लिन सक्छ, तर एकचोटि तपाईंले उफ्रिनुभयो भने, तपाईंको व्यवसाय फस्लिनेछ। अन्ततः तपाईले आफैलाई एक उद्यमीको रूपमा सोध्नु पर्ने प्रश्न यो हो;
"के मानिसले यो गर्नु पर्छ?"
अक्सर, हामी थकाऊ र नीरस कार्यहरु गर्न को लागी मानिसहरुलाई भाडामा लिन्छौं, केवल किनभने यो कम से कम प्रतिरोध को बाटो लाग्छ। तर दोस्रो कि हामी यी रेफरल मार्केटि tasks कार्यहरु को लागी समाधान को अनुसन्धान शुरू, हामी पाउँछौं कि ती मध्ये धेरै लाई थोरै को लागी कुनै लागत बिना स्वचालित गर्न सकिन्छ। यो हाम्रो मानव संसाधन रेफरल मार्केटि tasks कार्यहरु कि स्वचालित हुन सक्दैन मा ध्यान केन्द्रित गर्न को लागी अनुमति दिन्छ।
एक अधिक कुशल रेफरल मार्केटि work कार्यबल, कि, अरु सबै चीज को शीर्ष मा, सांसारिक काम संग काम नहुँदा खुसी छ। सही रेफरल मार्केटि software सफ्टवेयर किनेर, तपाइँ छिट्टै भेट्टाउनुहुनेछ कि उनीहरु नियमित रूप बाट रेफरल मार्केटि। अपडेट अपडेट बाहिर। सफ्टवेयर अपडेट प्राय: बाहिर ल्याईन्छ एक सेवा लाई अधिक कुशल बनाउन को लागी, नयाँ सुविधाहरु परिचय, र समग्र प्रयोगकर्ता अनुभव (UX) मा सुधार।
अन्तत: सफ्टवेयर अपडेट्सले तपाईंको व्यवसाय पदानुक्रम माथि र तल झर्दछ, तपाईंको व्यापारलाई चिकनाई र छिटो बनाउँदछ। जब रेफरल मार्केटिंग प्रणालीहरू अधिक कुशल हुन्छन्, उत्पादहरू वा सेवाहरूको लागि क्षमताको विस्तार पनि हुन्छ। व्यापारलाई अधिक कुशल बनाउँदा, तपाईं आफ्नो कम्पनीबाट ग्राहकहरूको बढि मागहरू पूरा गर्न बढी अवसरहरू सिर्जना गर्नुहुन्छ।
राम्रो तपाईं आफ्नो ग्राहकहरु र आला को सेवा गर्न सक्नुहुन्छ; जति खुशी ग्राहकहरू हुन्छन् र अधिक सकारात्मक मानिसहरूले तपाईंको बारेमा कुरा गर्छन्। अन्तमा, रेफरल मार्केटिंग दक्षता अनुकूलन उत्पादन र सेवाहरुमा त्रुटि को मार्जिन कम गर्दछ, तपाईंको व्यवसाय को परिपूर्ति सुधार गरी अधिक राजस्व बनाउन।
कारण:: रेफरल मार्केटि G ग्रोथका लागि मूर्त प्लेटफर्म प्रस्ताव गर्नुहोस्
रेफरल मार्केटि software सफ्टवेयरमा लगानी गर्नु भनेको ठोस व्यवसायको निर्णय हो जुन विकासलाई चार्ज गर्न सक्दछ। जब तपाईं व्यापार सुरु गर्नुहुन्छ - जे पनि उद्योगमा - तपाईं सामान्य रूपमा सानो सुरु गर्नुहुन्छ। आशा यो छ कि तपाई अनिश्चित कालको लागि बढ्नुहुनेछ, दुबै ग्राहकहरूको संख्या र कम्पनीको राजस्वमा। कुनै अन्य क्षेत्र प्रविधि जस्तै एकदम विस्तार गर्दैन।
निर्णय गर्दा के तपाइँको ब्यापार को लागी लगानी गर्न को लागी, के यो मद्दत गर्न को लागी यो छिटो र अधिक लगातार बढ्न को लागी विचार गर्नुहोस्। रेफरल मार्केटि software सफ्टवेयर मा लगानी गरेर, तपाइँ दुबै रेफरल मार्केटि software सफ्टवेयर र तपाइँको आफ्नै कम्पनी को क्षमता मा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ।
कारण:: छोटो अवधिको प्रतिबद्धताका साथ दीर्घकालीन लाभहरू प्राप्त गर्नुहोस्
जब तपाइँ रेफरल मार्केटि software सफ्टवेयर मा लगानी गर्नुहुन्छ, तपाइँ तपाइँको ब्यापार को लागी एक दीर्घकालीन लगानी गर्दै हुनुहुन्छ। रेफरल मार्केटि software सफ्टवेयर मा लगानी को बारे मा महान कुरा यो हो कि लाभ बर्षहरु को लागी अन्तिम हुन सक्छ। तेस्रो-पार्टी सफ्टवेयर को रूप मा तपाइँ मा निवेश कार्यक्षमता र दक्षता मा सुधार, यो मात्र मूल्य र दीर्घायु मा बढ्छ।
जबकि टेक्नोलोजी जरूरी सबैभन्दा स्थिर क्षेत्र होइन, यो एक हो कि सधैं बढ्दो छ। सफ्टवेयर मा लगानी छ कि तपाइँको ब्यापारिक प्रक्रियाहरु लाई सुव्यवस्थित गर्दछ विरलै एक गलत निर्णय हो।
रेफरल मार्केटिंग सफ्टवेयर प्लेटफर्ममा लगानी गर्दै - एकमा खरीद गर्दै रेफरल मार्केटिंग सफ्टवेयर कार्यक्रम वा SaaS मतलब छ कि तपाइँ तपाइँको व्यवसाय को सफलता को लागी एक आधार राख्दै हुनुहुन्छ। पैसा अब तपाइँ खर्च गर्नुहुन्छ मूल्य मा बढ्नेछ तपाइँको लगानी बाट ब्यापार लाभ को रूप मा।
उदाहरण को माध्यम बाट, एक लगानी तपाइँ एक रेफरल मार्केटि software सफ्टवेयर कार्यक्रम वा सास मा एक बर्ष को लागी एक कर्मचारी जो केवल एक बर्ष भन्दा कम तपाइँको कम्पनी को लागी काम गर्दछ मा लगानी गर्नु भन्दा धेरै लाभांश प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। कर्मचारी कारोबार भारी सम्बन्धित लागत छ। रेफरल मार्केटि software सफ्टवेयर संग, कि एक मुद्दा छैन।
कारण:: सुधारिएको ग्राहक प्रतिधारण
रेफरल मार्केटिंग सफ्टवेयरमा लगानी गरेर, तपाईं ग्राहक-व्यवसाय संचारमा ठूलो सुधार महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको निर्मित प्रक्रियाहरूको लागि धन्यवाद, रेफरल मार्केटिंग सफ्टवेयरले ग्राहकहरूसँग स्वाभाविक रूपमा सञ्चार सुधार गर्ने झुकाव राख्दछ।
चाहे यो ईमेल वा सोशल मिडियाको माध्यमबाट हो, रेफरल मार्केटिंग सफ्टवेयरमा लगानीले तपाईंलाई तपाईंको उद्देश्य दर्शकहरूमा पुग्नको लागि अधिक तरिकाहरू प्रदान गर्दछ। बदलेमा, तपाईंको व्यावसाय वर्तमान र सम्भावित ग्राहकहरूसँग सकारात्मक सम्बन्ध विकास गर्न र खेती गर्नबाट फल फल्न सक्छ। रेफरल मार्केटिंग सफ्टवेयरले अन्तर-व्यापार सम्बन्ध सुधार गर्ने अवसर पनि प्रदान गर्दछ।
यदि तपाइँ सूचित रेफरल मार्केटि software सफ्टवेयर लगानी छनौट गर्नुहुन्छ, तपाइँ तपाइँको छनौट कम्पनी संग एक पेशेवर सम्बन्ध बनाउनुहुनेछ। तपाइँ पनी सम्भवतः जडान गर्न को लागी सक्षम हुनुहुनेछ र अन्य व्यवसायहरु संग उही वा उस्तै टेक्नोलोजी को उपयोग संग नेटवर्क।
व्यापार सबै पारस्परिक लाभदायक सम्बन्धहरू बारे र विस्तार र विविधिकरणका लागि तरिकाहरू पत्ता लगाउने बारेमा हो। यदि तपाईं आफ्नो लाभको लागि ती जडानहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ भने दुबै कम्पनीहरूले विशाल वृद्धि र नवीनता देख्न सक्दछन्। एक वित्तीय निर्णयको साथ, तपाईं तपाईंको ढोका खोल्न सक्नुहुनेछ जडानहरूको पूर्ण नयाँ सेटमा जुन टेबलबाट बाहिर थियो।
कारण:: तपाईंको उत्पादकता वृद्धि गर्नुहोस्
दक्षता संगै, सही रेफरल मार्केटि software सफ्टवेयर उत्पादकता बढाउन सक्छ। यो विशेष गरी साँचो हो यदि रेफरल मार्केटि software सफ्टवेयर मा तपाइँ लगानी गर्नुहुन्छ तपाइँको वर्तमान एसओपी लाई सरल बनाउँछ र केहि व्यापार प्रक्रियाहरु लाई स्वचालित गर्दछ। कुन रेफरल मार्केटि software सफ्टवेयर मा तपाइँ लगानी गर्न छनौट गर्नुहुन्छ, तपाइँ सम्भवतः तपाइँको प्रणाली र स्टाफ को उत्पादकता बढाउनुहुनेछ।
अधिक सुव्यवस्थित कम्पनीले उच्च मात्रामा उत्पादन गर्दछ, कम मानव त्रुटि सहित। तपाईको ब्यापारले रेफरल मार्केटि software सफ्टवेयरको प्रयोग कार्यहरू अनुसूची गर्न र समय कम गर्न अन्य लक्ष्यहरू पूरा गर्न लिन सक्दछ। सहि रेफरल मार्केटिंग सफ्टवेयरको साथ तपाई सजिलै कार्यहरू डेलिगेट गर्न सक्नुहुन्छ सुनिश्चित गर्न को लागी काम छिटो र अधिक कुशलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ।
अनिवार्य रूप मा, तपाइँ तपाइँको कर्मचारी को समय फिर्ता किन्दै हुनुहुन्छ, र उनीहरुलाई नयाँ उद्यम को उपक्रम मा उत्पादक हुन को लागी अधिक समय दिइरहनुभएको छ।
कारण:: उत्तम सुरक्षामा पहुँच
धेरै व्यवसायहरू ह्याकि or वा साइबर धम्की र राम्रो कारणसँग डराउँछन्। टेक्नोलोजीले यी डरहरूलाई वास्तविक बनाउँदछ। सायद एक दिन केहि विनाशकारी नयाँ ह्याकको खबर बिना आउँदछ। विरोधाभासपूर्ण रूपमा, सफ्टवेयर उत्तम (मात्र?) रक्षा छ।
जब तपाइँ सबैभन्दा वर्तमान, इजाजतपत्र प्राप्त सफ्टवेयर वा तेस्रो-पक्ष सास उत्पादनहरु तपाइँको दिन को दिन को संचालन को प्रबंधन को उपयोग गरीरहनुभएको छ, तपाइँको कम्पनी यसको कोर मा सुरक्षा संग संचालित हुन्छ। रेफरल मार्केटि software सफ्टवेयर कम्पनीहरु मा तपाइँ तपाइँको भरोसा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ, तपाइँ त्यो विश्वास को उच्च मूल्य दिनु पर्छ। तिनीहरूको प्रतिष्ठा तपाइँको डाटा राख्न मा टिक्दछ; र तपाइँको ग्राहकहरु को डेटा सुरक्षित।
यो मात्र एक अर्को तरीका हो कि रेफरल मार्केटि software सफ्टवेयर मा लगानी एक दीर्घकालीन निर्णय को रूप मा समझदार बनाउँछ। तपाइँ तपाइँको कम्पनी को विस्तार गर्दा तपाइँको सम्पत्ति, विचारहरु, र ग्राहक डाटा को रक्षा। यदि एक निश्चित रेफरल मार्केटि software सफ्टवेयर उत्पादन को लागी मूल्य उच्च लाग्छ, यो लगानी को लायक छ यदि यो सुरक्षा को मतलब हो। अक्सर, सही रेफरल मार्केटि software सफ्टवेयर मा लगानी गर्न वा एक व्यापार तोड्न सक्छ।
प्रत्येक व्यवसाय को गोपनीय जानकारी को लागी उनीहरु भण्डारण गरीरहेछन् सुरक्षित गर्न को लागी उचित उपायहरु लिनु पर्छ। प्रणाली मा लगानी छ कि संवेदनशील ग्राहक डाटा को रक्षा एक डाटा भंग को जोखिम लाई कम गर्न को लागी एक तरीका मात्र होईन, तर ग्राहकहरु लाई तपाइँको व्यवसाय लाई बढावा दिंदा एक बिक्री बिन्दु को रूप मा सेवा गर्न सक्छ।
कारण:: सुधारिएको मार्केटिंग
सफ्टवेयरको साथ वा बाहेक तपाईंको व्यापारलाई सब भन्दा बढि विकास के दिन्छ?
राम्रो रेफरल मार्केटिंग।
टेक्नोलोजीको बारेमा सबै भन्दा राम्रो चीज भनेको फाइदा भनेको यो प्रदान गर्दछ जब यो रेफरल मार्केटिंगको कुरा आउँदछ। सोशल मिडिया प्रचार-प्रसारबाट विज्ञापनहरू, रेफरल मार्केटि। सफ्टवेयर सेवाहरूले तपाईंलाई शब्द फैलाउन र तपाईंको व्यवसायको बारेमा चाँडै जागरूकता जगाउन सक्षम गर्दछ।
धेरै रेफरल मार्केटिंग सेवाहरू मार्केटिंग रणनीतिहरू प्रबन्ध र नियन्त्रण गर्न हजारौं प्रयोगकर्ताहरू द्वारा प्रयोग भइरहेको छ। यस्तै रेफरल मार्केटिंग कार्यक्रमहरूमा लगानी गरेर, तपाईं आफ्नो रेफरल मार्केटिंग प्रयासहरू स्ट्रिमलाइन गर्न सक्नुहुनेछ जब तपाईं आफ्नो एक्सपोजरको साथसाथै अपग्रेड गर्नुहुनेछ।
कारण:: नयाँ ढोका खोल्नुहोस्
नयाँ टेक्नोलोजी संग नयाँ अवसरहरु आउँछ। यस बिन्दु सम्म सबै कुरा बृद्धि र विकास को लागी अवसर को उल्लेख गर्दछ। त्यो सबै सत्य हो।
टेक्नोलोजीले ढोका खोल्यो जुन तपाईंले आफ्नो व्यवसायको लागी कल्पना पनि गर्न सक्नुहुन्न। मिड-ग्रोथ चरणमा उनीहरूको प्रारम्भिक कम्पनीहरूले नयाँ रेफरल मार्केटिंग सफ्टवेयर आविष्कारहरू र उनीहरूले सिर्जना गर्ने आविष्कारकहरूमा लगानीबाट लाभ उठाउन सक्छन्।
रेफरल मार्केटि software सफ्टवेयरमा लगानी बिना, तपाईंको कम्पनीले प्रणालीहरू पुरानो हुने बित्तिकै स्टाल हुन सक्छ, ग्राहकहरूले तपाईंको उत्पादन वा सेवा त्याग्छन् वा टोलीका सदस्यहरू अव्यवस्थितिको कारणले छोड्छन्।
यहाँ एउटा तथ्य छ; केवल कम्पनीहरु र उत्पादनहरु कि विकसित विश्व र अर्थव्यवस्था को highs र lows बाँच्न सक्छ। जब तपाइँ तपाइँको ब्यापार को वित्त संग प्रगतिशील छनौट गर्नुहुन्छ, तपाइँ तपाइँको व्यापार मात्र जीवित रहने छैन पत्ता लगाउनुहुनेछ; यो फस्टाउनेछ। रेफरल मार्केटि software सफ्टवेयर लगानी बिना, तपाइँको कम्पनी असफल हुनेछ किनकि यो बढ्न सक्षम हुनेछैन।
लगानी हरेक व्यवसायको मुटुमा हुन्छ। एक व्यवसाय मालिक वा मुख्य कार्यकारी अधिकारीको रूपमा, तपाइँ निर्णय गर्नुहुन्छ कि तपाइँको पैसा कहाँ जान्छ। एक मात्र तरीका जब व्यवसाय बढ्छ केवल परस्पर व्यवहारको मूल सिद्धान्त हो।
तपाईंले आफ्नो निर्णयमा परस्पर लाभदायक अवसर फाउन्डेन्टलको यो सिद्धान्त बनाउनु पर्छ; मुख्य रूपमा जब रेफरल मार्केटिंग सफ्टवेयरमा लगानी गर्ने। जब तपाईं नयाँ व्यापार वर्षको सुरूका लागि ड्राइंग बोर्डमा फर्कनुहुनेछ, विचार गर्नुहोस् रेफरल मार्केटिंग सफ्टवेयर लगानी तपाईंको व्यवसाय अगाडि बढाउन के गर्न आवश्यक छ।
यसको मतलब सेवाको रूपमा सानो सफ्टवेयर हो (SaaS) तपाइँको प्रणाली लाई सुव्यवस्थित गर्न को लागी खरीद वा एक रेफरल मार्केटि software सफ्टवेयर कम्पनी संग एक दीर्घकालीन साझेदारी मा लगानी गर्न को लागी, यो निर्विवाद त्यहाँ मुश्किल प्रश्न सोध्न को लागी वर्तमान जस्तै समय छैन। एकपटक तपाइँ pinpointed जहाँ तपाइँको लगानी जानु पर्छ, यो समय यो गर्न को लागी हो।
नि: शुल्क रेफरल फ्याक्ट्री प्रयास गर्नुहोस्
प्रकटीकरण: यस लेखमा सम्बद्ध लिंकहरू सामिल छन् रेफरल कारखाना.
टैग: संबद्धरेफरल कारखानारेफरल मार्केटिंगरेफरल मार्केटिंग रणनीतिरेफरल कारणहरूरेफरल ट्राफिक